Spring Break Resources 2018 / Fasaxa Xilliga Gu’ga: Barnaamijyada iyo Waxyaabaha La Samayn Karo
Fasaxa Xilliga Gu’ga Maarso 30-Abriil 6: Barnaamijyada iyo Waxyaabaha La Samayn Karo
Fasaxa xilliga gu’gu wuxuu billabanayaa Jimcada, Maarso 30. Hoos waxaa ku daabacan macluumaad laga heli karo SPPS iyo ururrada ay wada-shaqaynta leeyihiin si loo hubiyo in arday walba uu helo fasax xiiso badan oo haddana ammaan ah.
Hawlaha iyo Barnaamijyada
Barnaamijka Waxbarashada Bulshada ee SPPS waxay ardaydu ka heli karaan barnaamijyo kala duwan oo qiimo jaban. Dhallinyaradu waxay kala dooran karaan inay helaan tababarka carruur-haynta ama sida loo ilaaliyo loona bad-baadiyo dadka biyaha ku dabbaalanaya (lifeguard). Ardayda dugsiga hoose waxay ka qaybgali karaan ciyaaraha jimicsiga (gymnastics).
Ardayda fasallada Preschool - fasalka 12
Qiimuhu wuu kala duwanyahay wuxuuna ku xiranyahay nooca barnaamijka. Booqo bartan si aad u hesho faah-faahin.
Booqo goobaha shaqada aroornimadii hore, kaddibna saaxibadda waqti la qaado galabnimadii. Ardaydu waxay samaynayaan saddex booqosho oo shaqooyinka la xiriira aroornimadii, galabtiina waxay booqan doonaan goobaha lagu nasto.
Wuxuu u furanyahay dhammaan ardayda SPPS ee fasallada 6-8
Qado ayaa goobta laga bixinayaa
Waa lacag la’aan/bilaash
Diiwaan-galintu waxay dhammaanaysaa Maarso 30
Barnaamijka Rock Climbing Half-Day Camp
Barnaamija Vertical Endeavors wuxuu ardayda siinayaa barnaamijka xiisaha badan ee koritaanka/fuulitaanka dhagaxyada waaweyn inta lagu jiro xerada nasashada ee maalinta badhkeed ah.
Wuxuu u furanyahay dhammaan ardayda SPPS ee fasallada 6-12
Qiimuhu waa $55
Maktabadaha Saint Paul Public Libraries
Wax badan ayaad ka faa’iidaysan kartaan barnaamijyada ka baxa maktabadaha magaalada inta lagu jiro xilligan fasaxa ah ee gu’ga. Sidoo kale, waaliddiintuna way ka soo qaybgali karaan barnaamijyadan.
Ardayda fasallada 1-6
Booqo bartan si aad u hesho macluumaadka goobaha iyo barnaamijyada
Diwaangalintu muhiim/qasab ma’aha
Goobaha Saint Paul Parks & Recreation
Maamulka magaalada Saint Paul waxay ardayda siiyaan barnaamijyo badan oo lacag la’aan ah ama qiimo jaban. Ardayda fasalka Preschool iyo kuwa dugsiga hoose waxay ka qaybgali karaan barnaamijyada ciyaaraha, farshaxanka, ama sayniska. Dhallinyaradu waxay ka qaybgali karaan ciyaaraha kubbada kolayga ama ‘robotics camps’, ama waxay ka qaybgali karaan tababarka carruur-haynta ama lifeguard-ka.
Ardayda fasallada Preschool – fasalka 12
Goobaha YMCA Day Camp Adventure Days at Camp St. Croix
Ka qaybgalka ‘Day Camp Adventure Days’ waxay ilmahaaga u tahay fursad qaali ah oo ay ku soo arkaan dhirta iyo waxyaabaha dabiiciga ah. Xilli kasta waxaa goobtan laga helayaa barnaamijo xiiso leh oo ay ka mid yihiin: fuulidda geedaha, isticmaalka leebka, habka barafka loogu dul ciyaaro, barashada waxyaabaha dabiiciga ah, ciyaaro, iyo waxyaabo kale oo badan.
Ardayda fasallada K- 6
YMCA Camp St. Croix (gaadiidka baska ayaa laga helayaa YMCA-ga ku yaalla Midway)
Qiimuhu waa $40 maalin walba
Diiwaan-galintu waxay dhammaanaysaa Maarso 26
Carwada xayawaanada ee Como Zoo waxaa laga helayaa bandhigyo, barnaamijyo iyo waliba sheekooyin. Si aad u hesho macluumaadkan oo dhamaystiran, booqo www.comozooconservatory.org. Galitaanku waa $3 oo tabarucaad ah dadka waaweyn ilmahana $2.
Matxafka Miinnesota Children’s Museum
Matxafka Children’s Museum ku qaado maalin nasaho iyo ciyaar ah oo ay ka mid tahay ‘Daniel Tiger’s Neighborhood: A Grr-ific Exhibit’. Qiimaha galitaanku waa $12.95 qof walba.
Matxafka Science Museum of Minnesota
Si aad u hesho macluumaad ku saabsan Matxafka Science Museum, booqo www.smm.org.
Casho bilaash ah oo qoyska oo dhan ah, ma jirto wax su’aal ah oo lagu weydiinayaono.
5-6 p.m. Isniin - Jimce
4:30-5:30 p.m. Axad - Jimce
Suuq cunto oo aan u baahayn ballan oo u adeega qoysaska ku nool aagga lambarkan boostada 55107.
9-11:30 a.m. iyo 1-3:30 p.m. Isniin, Talaado, Arbaco, Jimce
9-11:30 a.m. Khamiis
Suuq cunto oo aan u baahnayn ballan oo u adeega qoysaska ku nool aagga lambarkan boostada 55116.
9-11:30 a.m. Isniin 9-11:30 a.m. iyo 1-3:30 p.m. Talaado iyo Jimce
Suuq cunto oo aan u baahnayn ballan oo u adeega dhammaan qoysaska.
9 a.m. - 6 p.m. Isniin, 9 a.m. - 5 p.m. Talaado - Khamiis iyo 9 a.m. - 3 p.m. Jimce
Cuntooyin la siiyo dhammaan qoysaska.
Suuqa Cuntada: 9-11 a.m. Isniin iyo Arbaco, 1-3 p.m. Talaado iyo Khamiis
Waxaa laga bixiyaa qado iyo cuntooyin kale oo la siiyo dhammaan qoysaska. Cuntada dukaanka waxaa helaya oo kaliya 15-ka qof ee ugu soo hormara, waxaana loo kala helayaa sida loo soo kala hormaro.
Qadada: 11:45 a.m. - 12:45 p.m. Isniin - Jimce
Suuqa Cuntada: 9-10:30 a.m. and 2-3:30 p.m. Isniin - Jimce
Cunnooyinka laga iibsado dukaamada oo tayo leh. Waxaana ka mid ah helib iyo waxyaabo kale oo la heli karo maalmo kooban oo bisha gudaheeda ah. Waxaa adeeggan heli kara dhammaan qoysaska. Waxaa wax lagu gadan karaa lacag caddaan ah, kaaraka bangiyada iyo waliba kan cuntada ee dowlada ee loo yaqaanno EBT.
Waxay kaa caawin karaan inaad heso meelo aad ka heli karto cunto dheeraad ah oo aagga aad deggantahay ku taalla.